I-Raw Orlistat Powder (96829-58-2) Abakhiqizi - I-Phcoker Chemical
I-Raw Orlistat powder iyisidakamizwa esisetshenziswa ekwelapheni ukukhuluphala. Umsebenzi wawo oyinhloko ukuvimbela ukumuncwa kwamafutha avela ekudleni komuntu….
I-Raw Orlistat powder isekilasini lemithi ebizwa nge-lipase inhibitors esebenza ngokuvimba ukumuncwa kwamafutha angama-25% esidlweni futhi isetshenziselwa ukwehlisa isisindo kubantu abadala abakhuluphele ngokweqile, abaneminyaka engu-18 nangaphezulu, uma isetshenziswa kanye ne-kilojoule encishisiwe ukudla okunamafutha amancane. I-Raw Orlistat powder isidakamizwa esenzelwe ukwelapha ukukhuluphala. Umsebenzi wawo oyinhloko ukuvimbela ukumuncwa kwamafutha kusuka ekudleni komuntu, ngaleyo ndlela kunciphise ukungena kwe-caloric. I-Raw Orlistat powder isebenza ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini. Ngaphandle kwale enzyme, ama-triglycerides asuka ekudleni avinjelwe ekungenisweni yi-hydrolyzed ibe ngama-fatty acids angenakutholwa futhi akhishwe angadliwe. I-Prescription Raw Orlistat powder isetshenziswa kubantu abakhuluphele kakhulu abangase babe nengcindezi ephezulu yegazi, isifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, noma isifo senhliziyo. Ukusebenza kwe-Raw Orlistat powder ekukhuthazeni ukulahleka kwesisindo kucacile kepha kunesizotha. Idatha ehlanganisiwe evela ekuhlolweni kwemitholampilo iphakamisa ukuthi abantu banikezwe i-Raw Orlistat powder ngaphezu kokuguqulwa kwendlela yokuphila, njengokudla nokuzivocavoca umzimba, balahlekelwa cishe ngama-2-3 kilograms (4.4-6.6 lb) ngaphezu kwalabo abangathathi umuthi phakathi nonyaka. I-Raw Orlistat powder nayo ngesizotha inciphisa umfutho wegazi futhi ibonakale ivimbela ukuqala kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwe-2, kungaba kusuka ekulahlekelweni kwesisindo uqobo noma eminye imiphumela. Kunciphisa izehlakalo zesifo sikashukela sohlobo II kubantu abakhuluphele ngokulingana nenani elifanayo noshintsho lwendlela yokuphila.
I-Orlistat powder uhlobo lwe-lipase oluvimbela izidakamizwa zokulahlekelwa isisindo futhi luyisithako esivela ku-lipostatin. I-Orlistat ivimbela ngempumelelo futhi ngokukhetha isisu se-lipase ne-pancreatic lipase, ngenkathi ingenawo umthelela kwamanye ama-enzyme wokugaya ukudla (njenge-amylase, i-trypsin ne-chymotrypsin) kanye ne-phospholipase, futhi ayikuthinti ukumuncwa kwama-carbohydrate, amaprotheni kanye ne-phospholipids. Lesi sidakamizwa asimunciwe noma ngabe umgudu wamathumbu futhi sinomphumela wokuvimbela oguqukayo ku-lipase. I-Orlistat ivimbela ama-enzyme ngokubopha okuhlanganayo kokusalele kwe-serine ezindaweni ezisebenzayo zesisu ne-pancreatic lipase. Lokhu kuvimbela amafutha ekudleni ukuthi angahlukaniswa abe ngama-acid anamahhala kanye ne-diacylglycerol, ngakho-ke ayikwazi ukumuncwa, yehlise ukudla kwe-caloric ngakho-ke ilawule isisindo somzimba. Lesi sidakamizwa asidingi ukuthi simunceke umzimba wonke ukuze sisebenze. Umsebenzi we-Orlistat wemithi uncike kumthamo: isilinganiso sokwelashwa se-Orlistat (i-120mg / d, i-tid, ethathwe nokudla), kuhlanganiswe nokudla okunama-khalori aphansi, kunganciphisa ukufika ku-30% wokumunca amafutha. Esifundweni esiqhathanisa amavolontiya ajwayelekile futhi akhuluphele ngokweqile, i-Orlistat empeleni yayingamuncwanga umzimba nhlobo futhi yayinokuhlushwa kwegazi okuphansi kakhulu. Ngemuva kwesilinganiso esisodwa somlomo (esikhulu kunazo zonke singu-800mg), ukuhlanganiswa kwegazi kwe-Orlistat kulawa mahora alandelayo ayi-8 kwakungu- <5 ng / ml. Imvamisa, isilinganiso sokwelashwa se-Orlistat simuncwa umzimba kuphela futhi ngeke siqongeleleke ngesikhathi esifushane sokwelapha. Ekuhlolweni kwe-in vitro, isilinganiso sokubopha se-Orlistat namanye amaprotheni we-serum seqe ama-99% (amaprotheni aboshiwe ikakhulukazi ama-lipoprotein ne-albhamuin), futhi isilinganiso salo sokubopha ngamaseli abomvu egazi sasiphansi kakhulu.
Or I-Orlistat inciphisa isisindo somzimba ngamaphesenti angaphezu kuka-20 ngemali yamafutha omzimba
▪ I-Orlista ikusiza ukuthi ufunde ukubala ama-calories
▪ I-Orlista ikunikeza umuzwa wenhlalakahle
▪ I-Orlista inemiphumela emihle enikeza ukuzethemba nenjabulo kubasebenzisi
▪ I-Orlista inikeza imiphumela yesikhathi eside esimeme
▪ I-Orlista inciphisa ubucayi bezifo ezifana ne-hypotension, isifo sikashukela, i-atherosclerosis kanye
Ngenxa yokuthi i-Orlistat powder ikhonjisiwe ukunciphisa ukumuncwa kwamavithamini ancibilika ngamafutha kanye ne-betacarotene, abantu kufanele belulekwe ngokuthi bathathe i-multivitamin equkethe amavithamini ancibilika amafutha ukuqinisekisa ukudla okwanele. Ngaphandle, isithasiselo sevithamini kufanele sithathwe okungenani amahora we-2 ngaphambi noma ngemuva kokuphathwa kwe-Orlistat powder, njengesikhathi sokulala.